Injection ကိုများအတွက် gonadotropin (GnRH) - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
bovine & က်
Injection ကိုငါးအသုံးပြုရန် LHRH-A3
Injection ကိုငါးအသုံးပြုရန် LHRH-A2
Injection သည်ဒြပ်ပေါင်းများက S-GnRHa (Ovuhom)
Injection ကိုများအတွက် compound Gonadotrophin (Ovumon)
Injection ၏ chorionic Gonadotrophin (hCG)
Injection ကိုများအတွက် gonadotropin (GnRH)
ဆေးထိုးဘို့ Shuniu GnRH (နို့ထွက်တိရစ္ဆာန်များအဘို့သင့်လျော်သော) Gonaderelin အသစ်သောတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးမူးယစ်ဆေး၏အမျိုးသားရေးစတုတ္ထလူတန်းစား [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်အေးခဲ-ခြောက်သွေ့စိမ်းသို့မဟုတ်အမှုန့်အဖြူသို့မဟုတ်ပိတ်-အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ဒီထုတ်ကုန် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH) နှင့် luteotropin ဟော်မုန်း (LH) လွှတ်ပေးရန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့ prepituitary ဂလင်းလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့် follicular cyst အဘို့, Ovary ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်တစ်ဦး curative အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစမှကိုယ်ခံစွမ်းအားသောအမှုများကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ...
Shuniu GnRH (နို့ထွက်တိရစ္ဆာန်များအဘို့သင့်လျော်သော)
T က သူ national fourth class of new veterinary drug
ဒီထုတ်ကုန်ဟာ follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH) နှင့် luteotropin ဟော်မုန်း (LH) လွှတ်ပေးရန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့ prepituitary ဂလင်းလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့် follicular cyst အဘို့, Ovary ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်တစ်ဦး curative အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစ (hCG) သို့မဟုတ် LH gonadotrophin chorionic မှကိုယ်ခံစွမ်းအားသောအမှုများကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ follicles ၏မျိုးဥထွက်ပျက်ကွက် (နှောင့်နှေးမျိုးဥထွက်) ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်; ဒါဟာအတု fertilization နှင့်အတူပူးတွဲအသုံးပြုသောဖြစ်နိုင်ပြီး, သိသိသာသာတိရစ္ဆာန် estrous အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်များသောအားဖြင့် (ပို့ဆောင်မှုပြီးနောက် 40 ရက်အတွင်း) ဆေးခန်းပေးပို့ပြီးနောက် Ovary ၏အစောပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပွနျလညျထူထောငျအသုံးပြုသည်, ဒါဟာအချိန်ကိုက် estrus ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်, လုံးဝ bovine မွေးဖွားတိုးတက်စေရန်အဖြစ်ဒါပို့ဆောင်မှုကြားကာလကိုအတိုကောက်မှအတုသုက်အချိန်ကုန်သွားပါသည်။
[ ဦး ပညာရှိများနှင့်သောက်သုံးသော]
အဆိုပါ follicular cyst 1.Curing: က intramuscularly ဟာအရေးပါ follicular cyst ကုသမှုအတွက် 200 mcg များအတွက် Shuniu GnRH ထိုးသွင်းရန်အကြံပြုသည်, က intramuscularly ဟာပျော့ follicular cyst ကုသ 100 mcg များအတွက် Shuniu GnRH ထိုးသွင်းရန်အကြံပြုသည်။
2.It intramuscularly ယင်းမျိုးဥထွက်ပျက်ကွက်ကုသ 100 mcg များအတွက် Shuniu GnRH ထိုးသွင်းရန်အကြံပြုသည်။
3.It intramuscularly အဆိုပါသားအိမ် quiescence ကုသ 100 mcg များအတွက် Shuniu GnRH ထိုးသွင်းရန်အကြံပြုသည်။
4. ဒါဟာ intramuscularly ယင်းမျိုးဥထွက်မြှင့်တင်ဘို့ကို 100 mcg များအတွက် Shuniu GnRH ထိုးသွင်းရန်အကြံပြုသည်။
5. ဒါဟာနို့ထွက်တိရစ္ဆာန်များအဘို့အချိန်ကျော်လွန်သွားအတုသုက်များအတွက် Cloprostenol ဆိုဒီယမ်ဆေးထိုး (PG) နဲ့ပူးတွဲသုံးနိုငျ (သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုမှုနှင့်သောက်သုံးသောအဘို့, 19 ကိုကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး ကြိမ်မြောက် ဒီ manual ၏စာမျက်နှာ, Shuniu GnRH (နို့ထွက်တိရစ္ဆာန်များအဘို့သင့်လျော်သော) )
10 ပုလင်း× 100mcg
(20 ℃အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) အရိပ်တစ်ခုလုံခွအေနအေထဲမှာသိမ်းထားတဲ့။
7 ရက်, 12 နာရီနို့ဘို့အမဲသားကို။
ယခင်: Estradiol Benzoate Injection (အီစထိုဂျင်)
နောက်တစ်ခု: Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A2
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး human chorionic gonadotropin
စက်ရုံ gonadotropin Alarelin
အခမဲ့ chorionic gonadotropin
gonadotropin Injection သည် (Gnrh)
လူ့ Chor ionic gonadotropin
ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin
Inje များအတွက် Pituitary follicles စိတ်ကြွဆေးဟော်မုန်း ...
Injection ကိုများအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin ...
Injection ကိုများအတွက် Viatamin အေဒီ
Dexamethasone ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ် Injection
Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A2
E-mail ကို: 148259301@QQ.COM
ကျွန်ုပ်တို့၏ Altrenogest GMP လက်မှတ်လွန်
ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facility Visited